बैंकको लकरमा राखेका थिए लाखौं रुपैयाँ, ५ वर्षपछि खोलेर हेर्दा उड्यो होस - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बैंकको लकरमा राखेका थिए लाखौं रुपैयाँ, ५ वर्षपछि खोलेर हेर्दा उड्यो होस
बैंकको लकरमा राखेका थिए लाखौं रुपैयाँ, ५ वर्षपछि खोलेर हेर्दा उड्यो होस
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको कांगडा जिल्लाको थुरल बजारमा कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंकको शाखाको लकरमा राखिएका लाखौं रुपैयाँ धमिराले नष्ट गरेको छ । लकरमा राखिएका सुनका गहनाको रंग पनि बिग्रिएको छ । यो कुरा त्यतिबेला थाहा भयो जब ग्राहकले आफ्नो पैसा निकाल्नको लागि लकर खोले । बैंकका एक अधिकारीले बताएअनुसार लबरभित्र धमिरा र पानी कसरी पस्यो भन्ने कुनै जानकारी छैन ।
प्राप्त जानकारीअनुसार स्थानीय कान्हा सवां गाउँका सुशील कुमार शर्माको पैसा धमिराले नष्ट गरेको हो । उनका अनुसार उनले करिब ५ वर्ष पहिले बैंकको यो शाखामा लकर लिएका थिए । लकरमा उनले डेढ लाख रुपैयाँ र सुनका गहना राखका थिए । जून २०१८ मा उनले लबर खोलेर केही प्रसा निकालेका थिए । त्यतिबेलासम्म लकर ठिक थियो ।
सुशीलका अनुसार अहिले उनको घरमा एक धार्मिक समारोह हुँदैछ । यसैका लागि पैसा लिन उनी शनिबार बैंक गका थिए । उनले बैंकको लकर खोलेर हेर्दा भित्र राखिएका सबै नोट धमिराले माटोको थुप्रो बनाइसकेको थियो । गहना पनि पानीले खराब भइसकेका छन् । सुशीलका अनुसार लकरमा माटो र पानी छ । उनले यसको उजुरी बैंकको शाखामा गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा बैंकका अधिकारीले कुनै पनि लकर खराब नभएको बताएका छन् । सबै लकर सुरक्षित भएको भन्दै उनले सुशील कुमारको लकरमा धमिरा र पानी कहाँबाट आयो भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले नियमअनुसार लकरमा नगद धनराशी राख्न नपाइने पनि बताए ।
यी ५ प्रकारका पुरुषलाई घृणा गर्छन् महिला !पुरा पढ्नुहोस
आफूसँग फुटेको कौडी नभएर मन आत्तिएको छ, त्यसो भए अवश्य पढ्नुहोस् !!!
विश्वासै गर्न गाह्रो लाग्ने संसारकै ५ बिचित्रका कार (भिडियो सहित)
आफ्नो डिउटी सकिएपछि के गर्छन् एअर होस्टेजहरु ? हेर्नुहोस् केही गोप्य तस्बिरहरु !!
यो दिशामा बिर्सेर पनि सिरानी लगाएर नसुत्नुहोस , घरमा अशुभ हुन्छ